"Alaverdi" - यो के हो? "Alaverdi" को अर्थ। कसरी "Alaverdi" अनुवाद गर्न
जोरजियन आतिथ्य विश्वव्यापी प्रसिद्ध छ। त्यसपछि लामो समय को लागि आफैलाई लागि यो अनुभव भएकाहरूलाई समलिङ्गी अतिथि, समारोह को मास्टर witty एक धनी भोजन सम्झन्छन् र अन्यसँग ती सम्झनाहरु साझेदारी गर्नुहोस्।
Georgia - विश्वव्यापी
शब्द, सबै भन्दा हँसिलो चाडहरूमा लागि उपयुक्त - यो Georgia थियो अक्सर "Alaverdi" सुनिन्छ। तर, यो पहिले नै अन्य देशहरूमा छ सधैं अभिप्रेरित रूपमा सार्नु, विशेष गरी पूर्व सोभियत संघ, जहाँ यसलाई प्रयोग गरिन्छ छैन।
उदाहरणका लागि, एक हल्ला भोज, मान्छे राम्रो ताजा हुँदा र "आफ्नो छाती मा लिए," यो अन्त सुन्न सजिलो छ तिनीहरूले zanudlivym र खुलस्त नीरस फरक, विशेष गरी यदि toasts fidgets। त्यो अनन्त "Alaverdi", यसको भन्नु छ प्रतीक्षा गर्न सक्छन् नगर्ने ती वाणी टोष्ट थप्न आफ्नै सुनिन्छ चतुर विचार।
युरोपेली परम्परा alaverdy मा सबै भन्दा राम्रो मामला मा यो जस्तै केहि मतलब: "मलाई माथि थप्न गरौं।" को टोष्ट को एक यो सिध्याएपछि, शब्द संग अन्य "Alaverdi" विषयवस्तु विकास जारी छ।
Alaverdi - यो के हो?
जोरजियन परम्परा मा, सबै कुरा फरक छ। को उत्सव निमन्त्रणा मानिसहरूलाई अनादर गर्ने - त्यहाँ बस स्वीकार छैन, र अज्ञानता को उचाइ हुन मानिन्छ अवरोध गर्न टोस्ट। को टोष्ट आफ्नो भाषण समाप्त भएको थियो मात्र, त्यो या toastmaster अन्य पाहुनाहरूलाई शब्द पारित। यहाँ एक कार्य हो, अर्को टोष्ट स्थानान्तरण, र "Alaverdi" को अर्थ को। सोही, यो र व्यवहार को शब्दकोश। र यो शब्द औसत उमेर, को वृक्ष र immutable मा स्थानहरूको संख्या बुझाउँछ। तथापि, यो पनि पारस्परिक टोष्ट, माफी वा कार्य को अर्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि फेरि भन्छन्।
"Alaverdi" कसरी अनुवाद गर्न?
यो शब्द को एटिमोलजी Georgia र यसको आतिथ्य संग सीधा हामीलाई जडान गर्दैन बाहिर जान्छ। - "दिइएको" टर्की हालतमा मा "भगवान", र Verdi रूपमा अरबी देखि अनुवाद जो अल्लाह,: शब्द "Alaverdi" दुई शब्द मिलेर बनेको छ। "तपाईं परमेश्वरको दिनुहोस्," वा, एक embodiment मा "परमेश्वरको तपाईं संग हुन।": परिणाम हो
"लिन", "Verdi" - - "दिनुभयो" तर, शब्द दुवै भागहरु को तुर्की "आला" बाट अनुवाद गर्दा गर्दै छन्, अर्को व्याख्या छ। त्यसैले, जस्तै केहि: "म दिन्छु, तपाईंलाई।" यो विकल्प पहिले नै संभव अन्य एक वक्ता देखि टोष्ट को समारोह मा स्थानान्तरण को अर्थ भित्र समायोजित छ।
Alaverds र Alaverdoba
तर जसको अर्थ "Alaverdi" आफूलाई व्याख्या गर्ने Georgians, के? आफ्नो संस्करण ऐतिहासिक घटनाहरू आधारित छ। को XVII सताब्दी मा, सबै भन्दा प्रसिद्ध जोरजियन अगुवाहरू एक Bidzina Cholokashvili Kakheti प्राप्त Persians छुटकारा मदत गर्ने निर्णय गरे। आफ्नो विचार गर्न पक्कै सफल, उहाँले बारी मा, अर्को ढोका स्थित छ जो ksani को duchy देखि मदतको लागि आग्रह - को Ksani घाटी मा। छिमेकी अझै पनि राम्ररी बुझेका हुन थियो कि एक सन्देश एक दूत पठाएको अप दिइएको छैन। मा 28 सेप्टेम्बर मनाइन्छ जो patronal भोज, - राजकुमार सन्देश सही "alaverds" Avelardoba चाहनुभएको शब्द अनुवाद। त्यही दिन, राजकुमार Bidzina गर्न मद्दत आए र Kakheti जारी थियो।
अपरिचित सोध्न: Alaverdi - यो के हो? र Georgians प्रत्येक समय शब्द को ध्वनि आफ्नो पुर्खाहरूको शोषण सम्झना। र तिनीहरूले विभिन्न चाडहरूमा दलदल जो toasting को उद्देश्य, - एक indissoluble सम्पूर्ण मा भूत, वर्तमान र भविष्य जडान गर्न। त्यसैले जोरजियन toasts अक्सर धेरै लामो हो, 10 15 मिनेट को ध्वनि, एक हितोपदेश समायोजित गर्न सक्छन् र उद्धरण आवश्यक बुद्धि फरक र अन्त instructive छ।
त्यो स्मृति पुरातन घटनाहरू एक रिमाइन्डर Alaverdi मन्दिर छ, छैन कठोर छ। घटना, को वी शताब्दीमा Avvoyu यूसुफ Georgia हुँदा मसीही विश्वास प्रचार गर्ने वर्णन अघि तथापि, यो लामो बनाइएको थियो। पुरातन मन्दिर Telavi को शहर नजिकै स्थित छ। निस्सन्देह, उहाँले बारम्बार समय र शत्रुहरूको आक्रमणबाट नष्ट भएको थियो, तर यो 1741 मा, उदाहरणका लागि, पुनःस्थापित भएको थियो। यो मन्दिरमा Kakheti को राजाहरूको चिहानमा छ। तीर्थयात्रीहरू हजारौं मन्दिरमा तिहार अंकन, सेप्टेम्बर 14 मा यहाँ बगालको।
Alaverdi चाडहरूमा मा सुनिन्छ
शायद सोध्न आवश्यक छैन: Alaverdi - यो के हो? कुनै पनि जोरजियन भोज को विशेषता यस प्रकारको भएकोले। पछिल्लो मा म विशेष कुरा गर्न चाहन्छु।
जोरजियन भोजमा - धेरै भन्सार एक आकर्षक प्रभाव, एक शाही भोज वा नाटकीय प्रदर्शन resembling। को Georgians को आतिथ्य सिक्नुपर्छ। आखिर, तिनीहरूले हाम्रो प्रिय अतिथि लागि खेद हुन केही छ। यस त्यहाँ घर छ भनेर सबै भन्दा राम्रो तालिका मा राख्न। विभिन्न व्यञ्जन र पेय संख्या पाहुनाहरूको यो सबै खान भन्दा बढी हुन सक्छ।
यस भोजमा एक toastmaster छ मुख्यतया मा, यो पहिलो टोष्ट उहाँलाई लागि उठाएको छ थियो। को टोष्ट समयमा toastmaster अतिथि आफ्नो भाषण जारी गर्न तयार हुनुपर्छ। Tamada "Alaverdi" भन्दै अर्को "वक्ता" रोक्न, तर एक शब्द आफ्नो टोष्ट को अन्त मा, अचानक प्रस्ताव गर्ने अधिकार, छ। धेरै घन्टा को लागि भोज को अनुकूलन अनुसार रहन्छ। Tamada सबै समय क्रम निम्न, अंतराल घोषणा र पनि latecomers अतिथि दण्ड दिनु।
अझै जोरजियन भोजमा - यो मुख्य eloquence मा एक प्रतियोगिता हो। परंपरागत, यी चाडहरूमा कडाई पर्व विषय, पछिल्लो टोष्ट पहिलो देखि एक निश्चित अनुक्रम नियालेर पालन। सबै toasts संगीत र गीत साथमा जाने वस्तु हुन्। यो टोष्ट निष्क्रिय कुरा र चापलुसी व्यवहार र विशिष्ट निष्कपटता, इमानदारी र बुद्धि भोगे महत्त्वपूर्ण छ।
सबै सहभागीहरू ध्यान प्रत्येक अन्य सुन्न भोज, अवरोध गर्न टोष्ट Georgians विपरीत, छैन स्वीकार गरेका छन्: म फेरि दोहोर्याउन।
"? Alaverdi - यो के हो" मा लेख को अन्तिम भाग मा, सायद, अर्को शब्द उल्लेख र जोरजियन टोष्ट टोष्ट सुन्न गर्नुपर्छ।
यसरी: "यो सत्कार देश मा, वहाँ एक विश्वास, एक व्यक्ति सम्मान पाहुनाहरूसँग बिताउनुहुन्छ कि समय, यो उमेर मा गणना गरिन्छ भने छ। तसर्थ, Georgia मा अतिथि परमेश्वरको दूत भनिन्छ। त्यसैले हाम्रो युवा लम्ब्याउनु कि सम्मानित र प्रिय अतिथि लागि पिउन गरौं! "
"समय खण्डमा असल जग छैन कि गर्दैन, घर नष्ट भएको छ। परिवार कुनै चतुर र स्मार्ट पाहुना दिवालिया जान्छ छ। घर त्यहाँ एक स्वागत र दयालु पाहुना हो जहाँ वा परिवार मा, अतिथि हुन भएन। त्यसैले हामीलाई, टिकाउ बुद्धिमानी र सत्कार घर को मालिक को लागि पिउन गरौं! "
हिज्जे न्यूनतम के हो र यो समावेश? हिज्जे कम्तिमा रूसी भाषा
भाषा पेरु: राज्य के हो? पेरु मा कुन भाषा बोलेको छ?
एक agglutinative भाषा के हो?
वर्ष को लागि उपयुक्त राशि संकेत: मुसा, साँढे, बाघ, बिरालो, ड्रागन, सर्प
कसरी एक पटक र सबै को लागि "Vkontakte" सार्वजनिक पृष्ठ हटाउन?
पार्सर, यो के हो? विचार र आंदोलन
एल्क देखि व्यञ्जन
फ्रिज HOTPOINT ARISTON: निर्माण, मोडेल समीक्षा देश
Kashira Gres मनाइन्छ '91
जन्म दिने पछि परिमार्जन आंकडा। पुरानो फारम कसरी पुनर्स्थापना?
घर मा meringue को तैयारी, वा कसरी बनाउने meringue
मेरो कपाल हल्का खैरो रंग कसरी डाई
अर्धव्यास। विवरण। भंग केही प्रकार